မျက်နှာမှာရှိတဲ့ နေလောင်ကွက်နဲ့ အမည်းစက်တွေသက်သာစေဖို့ - Hello Sayarwon
Update Date ဇွန် 26, 2020 .2mins read
မျက်နှာက လူတစ်ယောက်အတွက် အရေးပါတဲ့ သွင်ပြင်လက္ခဏာပါနော်။ လူအများစုပြောကြတာက စိတ်ဓာတ်ကိုကြည့်ပေါင်းတာဆိုပေမယ့် တကယ်တော့ စတွေ့စမှာ ရုပ်ရည်သွင်ပြင်ကိုကြည့်ကြတာပါ။ လှပကြော့ရှင်းတဲ့သွင်ပြင်က ယုံကြည်မှုကိုပါတိုးစေတာပါနော်။ ဒီလိုအရေးပါတဲ့ မျက်နှာလေးမှာ နေလောင်ကွက်တွေ အမည်းစက်တွေဖြစ်နေမယ်ဆိုရင် တော်တော်လေးစိတ်ပျက်မိမှာအမှန်ပဲနော်။ ဒီအရေးပါတဲ့ မျက်နှာ သွင်ပြင်လေးကို နေလောင်ဒဏ်နဲ့ အမည်းစက်တွေကြောင့် အလှမပျက်စေဖို့ ဒီဆောင်းပါးလေးကနေတဆင့် ကူညီပေးပါရစေ။
အမည်းစက်နဲ့ နေလောင်ကွက်တွေအတွက် ထိရောက်တဲ့ ကုထုံးတွေကဘာတွေများလဲ……….
မျက်နှာပေါ်ကနေလောင်ကွက်နဲ့ အမည်းစက်တွေကို သက်သာစေဖို့ဆိုရင် ဒီနည်းလေးတွေက အဆင်ပြေစေမှာပါ။
လေ့လာသုတေသနပြုချက်တွေအရ Beta-carotene ကဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်ပစ္စည်းတစ်မျိုးဖြစ်ပြီး အသားအရေကို လိုအပ်တဲ့အာဟာရဖြည့်တင်းပေးနိုင်သလို နေရောင်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ အသားအရေထိခိုက်မှုတွေကို လျော့ပါးသက်သာစေနိုင်ပါတယ်။ မုန်လာဥနီ၊ ဟင်းနုနွယ်နဲ့ သခွားမွှေးတို့မှာ Beta-carotene ပါတယ်ဆိုပေမယ့် လုံလောက်တဲ့ ပမာဏရရှိဖို့ဆိုရင်တော့ Beta-carotene ဖြည့်စွက်ဆေးတစ်ခုခုသောက်ပေးပါ။
Retinoids ပါဝင်တဲ့ လိမ်းဆေးတစ်ခုခုလိမ်းမယ်
ဒီဒြပ်ပေါင်းက အရေပြားက ကော်လာဂျင်ပမာဏကိုတိုးစေနိုင်ပါတယ်။ ခရင်မ်ရှိသလို Serum အနေနဲ့လည်း အသုံးပြုနိုင် ပါတယ်။ ဒီနည်းလမ်းကလည်း နေလောင်ကွက်နဲ့ အမည်းစက်တွေလျှော့ပါးသက်သာစေနိုင်ပါတယ်။
Chemical peeling လုပ်မယ်
ဒီကုထုံးကတော့ အပေါ်ယံအရေပြားက ဆဲလ်သေတွေ၊ ပျက်စီးနေတဲ့ဆဲလ်တွေကို ဖယ်ရှားတဲ့ကုထုံးပါ။ ဆရာဝန်က ညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်း လိုက်လုပ်ရုံပါနော်။ alpha-hydroxy acid cream ဒါမှမဟုတ် salicylic acid cream ကိုအသုံးပြုပြီးဆဲလ်သေတွေကိုဖယ်ရှားလို့ အရေပြားကိုပြန်ပြုပြင်တဲ့နည်းပါ။
ဒီကုထုံးကတော့ ဆန်စေ့လိုမျိုး အစေ့အဆန်တွေ၊ ပုံဆောင်ခဲလေးတွေ ဒါမှမဟုတ် စိန်တုံးရဲ့ ထိပ်ကလိုမျိုး အချွန်သေးသေးလေးတွေကို အသုံးပြုပြီး အပေါ်ယံအရေပြားကို ဖယ်ရှားတဲ့ကုထုံးပေါ့။ ဒီနည်းလမ်းက ကော်လာဂျင်တွေဖြစ်ပေါ်လာအောင်လှုံ့ဆော်ပေးပြီး အရေပြားကိုကြည်လင်လှပစေနိုင်ပါတယ်။
ကုန်ကျစရိတ်အများဆုံးနဲ့ အထိရောက်ဆုံးနည်းလမ်းပါ။ အခြားကုထုံးတွေထက်ပိုမိုကုန်ကျနိုင်ပါတယ်။ အရေပြားကို ထွင်းဖောက်နိုင်တဲ့ လေဆာရောင်ခြည်ကို အသုံးပြုပြီး ပျက်စီးနေတဲ့အရေပြားအလွှာကိုဖယ်ရှားပြီး အရေပြားကိုအသစ်ဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ကုထုံးပါ။
ကဲ မျက်နှာပေါ်က နေလောင်ကွက်တွေနဲ့ အမဲစက်တွေကြောင့် စိတ်ညစ်နေတာလား။ အခုပြောခဲ့တဲ့နည်းလမ်းလေးတွေကိုသုံးလို့ နေ့ရက်တိုင်း ကိုယုံကြည်မှုရှိရှိဖြတ်သန်းလိုက်ကြစို့လား………..
အသားအရေလှချင်ရင် ညနက်မှ အိပ်တဲ့အကျင့်ကို အရင်ဖျောက်ပါ
ကိုဗစ်က သက်သာလာရင်ရော ဘာတွေခံစားရနိုင်မလဲ……… ကိုဗစ်အလွန် ဝေဒနာတွေ ခံစားရနိုင်ပါတယ်။ ဒါတွေက ဘာတွေလဲဆိုတော့.....
ကူးစက်ရောဂါများ, ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ဩဂုတ် 3, 2021 .2mins read
အုန်းလက်၊ အုန်းမြစ် တို့ကလည်း ဆေးဖက်ဝင်ပါတယ်
အုန်းလက်၊ အုန်းမြစ် တို့ကလည်း ဆေးဖက်ဝင်ပါတယ်။ အုန်းသီးကတင် စားလို့ရပြီး ဆေးဖက်ဝင်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ အုန်းလက်၊ အုန်းမြစ်တွေကရော ဘယ်လို ဆေးဖက်ဝင်တာလဲ။
အာပူရွက် ရဲ့ကျန်းမာရေး အာနိသင်
အာပူရွက် ကို Urtica dioica လို့ ခေါ်ပြီး လက်တင်စကားလုံး uro ကနေ ဆင်းသက်လာတာပါ။ ပူနွေးခြင်းလို့ အဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်။ အကြောင်းက ထိရင်၊ စားမိရင် ပူနွေးစေလို့ပါပဲ။
သဘာဝဆေးဖက်ဝင်, သဘာဝဆေးဖက်ဝင်ပစ္စည်းများ မတ် 5, 2021 .2mins read
ကော်လာဂျင်နဲ့ မေးခွန်းများစွာ ကော်လာဂျင်က ကျန်းမာရေးအတွက် အကျိုးကျေးဇူးတွေ များပေမယ့် ကော်လာဂျင်ကို အသားအရေအတွက် အဓိက သောက်ကြပါတယ်။
ကျန်းမာစွာ စားသောက်ခြင်း, အခြားအာဟာရဆိုင်ရာနည်းလမ်းကောင်းများ မတ် 4, 2021 .2mins read
Copper က ကျန်းမာရေးကို ဘယ်လို အားဖြည့်ပါသလဲ………